I-Apple MacBook | Ndisuka mac
Nge-9 kaMatshi ngo-2015 kuyakhunjulwa ngokusungulwa kweMacBook entsha, ewe, igama lale khompyutha intsha ye-Apple yile: these.
Sijonge ilaptop kaApple enemilinganiselo emangalisa ngokwenyani kwaye singatsho ukuba sijongane neyona Mac incinci yaziwa ukuza kuthi ga ngoku, idlula iMacBook Air encinci. Le MacBook inayo 13,1mm ubukhulu, inobunzima nje nge-0,9kg kwaye ine-12-intshi yeRetina isiboniso eya kuvuyisa abasebenzisi.
Enye into engaqhelekanga kwezi Macbook yindlela yokuguqula umkhondo, Force Force. Le trackpad intsha yongeza unqakrazo olufanayo kumphezulu uphela kwaye ii-sensors ezintsha zongezwa ukubona amandla omsebenzisi xa ucinezela. Ukuzimela kweeyure ezili-9 Ngokuka-Apple uqobo kunye nentsha kunye izibuko elinye le-USB-C Nazi ezinye zeenkcukacha zale MacBook intsha.
Sinokuqaqambisa ukuba iApple ishenxisa uphawu olubuyiselwe umva ngasemva kwesikrini, eli qela litsha longeza enye efana naleyo yee-iPads zangoku kwaye iyafumaneka ngemibala emithathu: Isilivere, iGrey Space kunye neGolide.
Iindaba malunga neMacBook entsha
Apha ungabona zonke iindaba eziphuma mihla le malunga neApple MacBook entsha.
Intengiso yeMacBook kwiQ2020 XNUMX igqwesa iilaptops ezininzi zePC
por UToni Cortes yenzayo Iinyanga ze3 .
Xa uCraig Federighi esibonisa okokuqala iMacbook yokuqala yexesha le-Apple Silicon, kunyaka ophelileyo kwaye…
Izikrini zeMacBook Pro zinokuqhelana nomsebenzisi ngokuzenzekelayo
por UManuel Alonso yenzayo Iinyanga ze5 .
Ukuba onke amalungelo awodwa omenzi we-Apple abe yinyani, ngaphezu kweekhompyuter besinokuthanda iingcaphephe ezincinci esinazo….
Iindleko zewaranti ehlawulwe yi-Apple ziyehla unyaka nonyaka
Uninzi lwethu aluzazi iindleko zenkampani enkulu efana neApple ukugubungela zonke iingxaki ...
I-MacBook Air ka-2022 inokuza ne... igama elitsha
por UManuel Alonso yenzayo Iinyanga ze7 .
Umoya weMacBook kulindeleke ukuba ube nohlengahlengiso oluhlaziyiweyo ukuya kumaxesha. Eyona modeli incinci kwaye ...
I-Apple iya kuba nakho ukuthengisa i-80% yeelaptops zizonke ze-ARM kwintengiso yalo nyaka
por UToni Cortes yenzayo Iinyanga ze7 .
Alithandabuzeki elokuba ukuzibophelela kuka-Apple kwixesha elitsha leeMacs Apple Silicon ibe…
Abasebenzisi beMacBook abayi-12 intshi baphononongwa yiApple
por UToni Cortes yenzayo Iinyanga ze9 .
I-Apple isenokucinga ngokuqalisa kwakhona iMacBook eyi-12-intshi. Wayisungula ngo-2015 kwaye ...
Abasebenzisi abaninzi baNgxelo ngokungaqhelekanga kwesikrini kwiApple Silicon MacBooks
por UToni Cortes yenzayo Iinyanga ze10 .
Abasebenzisi abaliqela baxela ingxaki efanayo kwiiMacBooks zabo kwinethiwekhi yoluntu: isikrini siqhekeka ngaphandle ...
I-12-intshi iMacBook yongezwe kuluhlu lwe-Apple "Vintage"
Inkampani yaseCupertino yongeze iMacBook Retina nge ...
IiMacBooks ezinesikrini esincinci se-LED asizukufika de kube ngu-2022
por UIgnacio Sala yenzayo Iinyanga ze12 .
Ngokumiliselwa kwe-12,9-intshi ye-iPad Pro ngomboniso we-mini-LED, abasebenzisi abaninzi balindele ukufika ...
Isenzo sokuqala sokumangalelwa ngokuchasene neApple ngokufakwa kwekhibhodi yebhabhathane kwiMacBook
por UManuel Alonso yenzayo 1 ngonyaka .
Ikhibhodi yebhabhathane kwafuneka (kwaye) imbi kakhulu ukuba isathethwe ngayo. Ke…
Ihenjisi engenawo amanzi inokuyenza ukuba iye kwiMacBooks
Enye yezona zinto zixhalabisayo sinazo njengabanini beMacBook (ndicinga ngayo nayiphi na ilaptop, kodwa ngakumbi ...
Ibhetri yeMac kunye neentsomi zayo ezisezidolophini